Warsame Maxamed Nuur Garaad Noor | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Wanaaga uu Eebe nagu galaday waxaa ka mid ah ammaan in lagu noolaado islamarkaana qofka uu helo cunto, hu, gabaad, xasillooni markaa kadib shakhsiga waxa uu ka fekeraa maalhamaaga soo socda sidee u maareeysaa? Sidee u gaartaa hadafyadaada nolosha tan dhaqaale shaqo, cilmi iyo aqoon kororsi? Shaki kuma jiro inay noloshu mowjadu kala hirar ay leedahay ayna u baahan tahay sabar adkeysi iyo hiigsi yoolkana yahay inaad hesho nolol maalmeed iyo meel aad ka soo saarato. Qofka waxa uu ku dalaala si uu udhiso shakhsiyadiisa una haggaajiyo noloshiisa u gaarka ah isagoo u maraaya waxqabsi iyo aqoon kororsi. Mid walboo …
Ma ogtahay Sida Ay Hormone-nada u Saameeyaan Masakaxdeena iyo Jirkeena?
Marka hore ma ogtahay in maskaxdaadu ay la xiriirto dhammaan jirkaaga? Maskaxdu waxay jirka u dirtaa dareero kiimiko ah oo la yiraahdo hoormoono, hoormoonadaas waxay si toos ah u saameeyaan jirka oo dhan waxay sare u qaadi karaan ama hoos u dhigi karaan tamarta jirka ku jirta dareenka, xaalada jir ahaaneed, iyo firfircoonida jirka qofka sida jinsiga, farxada, baabi’inta baruurta iwm. Hoormoonadaas waxaa ka mid ah DOPAMINE:- Hoormoonkan waxaa la yiraahdaa hoormoonka farxadda ama hoormoonka dareenka waxa uu ka dhiga qofka mid faraxsan shaqo badan Tusaale: waxay saynisyahano tijaabo cilmi ah ku sameeyeen jiir waxay hor dhigeen cunto yar iyo …
Waa soo jeedin, ama qorshe nabadeed oo loogu talagalay xalinta khilaafka Israel iyo Falastiin, oo uu soo diyaariyey Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Qorshahan ayaa waxaa ka mid ah:- abuurista sanduuq maalgalin oo caalami ah laguna taageerayo dhaqaalaha Falastiin iyo waddamada deriska ah ee Carbeed, waxaana jirtay in Jared Kushner oo uu soddoga u yahay Trump hordhigay inta lagu gudajiray shir ka dhacay Baxreyn waxa uu yahay qorshahan oo la qabtay Juun 25 iyo 26, 2019. Tan iyo sanadkii 2017, maamulka madaxweyne Donald Trump wuxuu diyaarinayay qorshe nabadeed oo ku wajahan Bariga Dhexe si loo soo afjaro khilaafka Carabta iyo Israel. …
Gorgorka waxa uu ka mid yahay shimbiraha ugaarsada xayawaanada kale ee cuna. Gorgorka wuu noocyo badan yahay waxaana lagu qiyaasaa jinsiyada gorgorka uu ka soo jeedo illaa 63 nooc oo kala jaad ah. Gorgorka wuxuu leeyahay af adag oo u sameysan qaab dheer oo qalooca. Kalaro baalal kala duwan. Miisaankiisa Waxaa lagu qiyaasaa gorgorka illaa 5-8 kg inuu culeeskiisa gaaro. Baalashiisa waxay gaarayaan 60-75 Cm, Lugahiisa waa kuwo awood leh. Noocyada Gorgorka waxa uu si toos ah u duuli karaa illaa 600 mile saacadiiba isagoo samada haadaya. Waxa uu dhulka ka arki karaa wixii uu ugaarsan lahaa cabir dhan 200 …
Maxaad ka ogtahay maalinta Caashuuraa? _____________ Muslimiinta caalamka ayaa ku faraxsan soonka caashuuraa, maalinta sagaalaad iyo tobonaad ee bishan muxarram ah sanadka islaamka ee hijriga ah 1441 kuna aadan 9.9.2019. Sidee ku timid soonka maalinta Caaahuuraa? _____________ Nabiigeena Muaxamed Naxariis iyo Nabadgelyo Eebe korkii ha yeelee ayaa ku booriyay sabaaxadiisa inay soomaan caashuuraa maalin ka hor ama kadib maalin si aynu u khilaafno Yuhuuda. Maalintan waa maalintii illaahay badbaadiyay Nabi MUUSE Naxariis iyo Nabadiino korkii rabi ha yeelee kana badbaadiyay cadowgii fircoon ahaa. Nabiigeena Muxamed NNKAH wuu soomay, asxaabtiina Rc wuu faray inay soomaan Waxa uuna yiri:- ”anigaa uga dhaw …
بسم الله الرحمن الرحيم Qofka Alle iyo Nabi rumeeyay wuxuu ku dadaalaa inuu waqtigiisa geliyo maalmaha iyo waqtiyada kheerka badan ee ilaahay iyo rasuulkiisa tilmaameen waxaana ka mid waqtiyadaa kheerka badan 10ka maalin ee bisha dilxijah oo ay ku dhex jirto maalmo kheer badan sida gudashada waajibka xajka maalinta carafo iyo camalo fara badan. Si aan uga wada qeyb galno maalmahaan wanaaga badan waxaan idin soo gudbinayaa dariiqooyinka aan kaga wada faa’idaysankarno Insha’Allaah. ( 1 ) Ma ogtahay? Ma dooneysaa inaad barato fadliga ay leedahay bilowga bishaan dilxijah? Ogoow waxaan ku dhex jira maalmo iyo maalin kheer badan. Waa …
Qalbiga wanaagsan ee toosan waxaa lagu gartaa calaamado kuwaasoo uu kaga duwanyahay qalbiyada dadka kale. Hadaba sii aqri qoraalkan: * Qalbiga wanaagsan waa mid ulaabasho badan una towbo noqod badab rabigeena sarreeyee• * Qalbiga wanaagsan waa kan ka maran xumaanta ilaaliyana akhlaalkhda wanaagsan kana fog dhaqanka xun. * Qalbiga wanaagsan xaasidnimo iyo xiqdi iyo caro uma qaado dadkale• * Qalbiga nabad galay waa mid raali ku ah kuna qanacsan qadarta iyo maamulka ilaahay ee ku saabsan umuuraha aadanaha oo dhan• * Qalbiga suuban waa mid og in dunida tahay marin oo ay dhamaaneyso, Inta badan qalbiga qofka toosan waxa uu …
Ugu horeyn waxaan fasiraad ka bixineynaa waa maxay qoys? Qoysku waa halka uu ka unkamo taranka bulshada iyo bini’aadanka, waana halka isku haysa qeybaha reerka, lagana helo sacaadada, daganaanta iyo isku xirnaanta. Sidaa oo ay tahay hadana qoysaka waxa soo waajaha dhibaatooyinka mushkilado khilaafaad la socda nolosha caadiga ah. Arinta waa nolosha xaalkeeda waana abuur Alle oo dadku way isku dhacaan waxaana ugu wacan kala duwanaashaha abuurka dabeecadaha iyo kala fikir duwanaasha dadka ka dhex jira hayeeshee xallin ayaa loo baahanyahay. Qoyska lamaanaha dhexdooda waxaa ka dhex dhici karaa khilaaf caruurtana waxay sameen karaan waxay labada waalid rabin. Macnaha …
Soomaaliya iyo Shiinaha waxay lahaayeen waligood xiriir qoto-dheer oo taariikh fog leh kaasoo soo jireen ahaa qarniyo hore. Xiriirka labada dal iyo dadba waxa uu ahaa mid ka dhaxeeya labada shacab waxa uu ahaa xiriirkaas dhinacyada kala ah:- Ganacsiga Ciidanka Dhaqanka iyo luuqahaha Qarniyadii Dhexe Xiriirka ka dhaxeeya labada shacab ee Soomaalida iyo Shiineeska waa mid fog,jirayna qarniyadii hore iyo kan sabanno dhexe. Xiriika ayaa ku bilowday ganacsi waxa uuna ku bilowday in Soomaalida ay u dhoofiyaan duur joog uu dalka Soomaaliya hodan ku yahay sida Gariga, cowsha, dameer faroowga iwm. Waxaa kaloo ganacsatada Soomaalida ay Shiinaha u dhoofin …
Biyaha oo lacabo waxay leeyhiin faa’idooyin badan waxaan halkan kusoo gudbinaynaa 10 faa’ido oo muhiim ah kuwaaas oo laga helo biyo badan oo la cabo. 1. Biyo badan oo la cabo waxay faa’ido u leedahay jirdhiska iyo jimicsiga. Daraasad lagu sameeyay ragga iyo dumarka jimicsiga ciyaara waxaa lagu ogaaday kuwa caba 2 koob oo biya ah ka hor jimicsiga inta ay bilaabin ay helaan nashaad iyo jir ka wanaagsan kuwa biyaha yar caba. Ciyaartoyda biyaha cabta waxay ka helaan dheefshiid wanaagsan iyo amateedka cuntada oo u furma iyo jir siman. 2. Biyaha caadiga ah oo aad loo cabo waxay …